Tsvaga kuti mitero yePortugal inobhadharwa sei Kufamba Nhau
Susana Garcia | | General, Putugaro
Kufamba kuenda kuPortugal nemotokari zvakajairika kana tikabva kuSpain, saka unofanirwa kuziva sarudzo dzatinadzo nemugwagwa. Kunyangwe zvichikwanisika kutsvaga migwagwa isina mubhadharo, iwo ari iwo chaiwo magwagwa anotora nguva yakareba. Sarudzo huru pakushanyira Portugal nekufamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda pane imwe kushandisa ma toll. Ndosaka tiri kuenda kuzoona mashandiro emitero muPortugal.
Izvi mitero inowanikwa mumugwagwa mukuru uye pazviitiko zvakawanda hazvishande senzvimbo yedu, saka zvirinani kuve neruzivo rwezvatinofanira kuita. Ipapo chete ndipo patinogona kuronga pamberi pekufamba rwendo nemotokari muPortugal kuti tione maguta makuru uye nzvimbo dzekufarira.
1 Maitiro ekubhadhara mutero muPortugal
1.1 Bhadhara neyemagetsi toll mudziyo
1.2 Kadhi rakabhadharwa kare
2 Chii chinoitika kana ma toll asina kubhadharwa
3 Maitiro ekuziva zvandiri kubhadhara
Maitiro ekubhadhara mutero muPortugal
Kusvikira 2010 tanga tine pfungwa imwechete sepano paive nematumba ekubhadhara mutero uri munhu. Asi kubva ipapo ivo vakabviswa uye inobhadharwa neimwe nzira. Kune vanhu vazhinji vakavhiringidzika pavanoona kuti hapana matumbasezvo vasingazive mabhadharo avanofanira kubhadhara. Nekudaro, maitiro acho ari nyore. Kune nzira dzinoverengeka dzekubhadhara mugwagwa mukuru muPortugal mutero.
Bhadhara neyemagetsi toll mudziyo
Imwe yei nzira dzekubhadhara dzauinadzo kushandisa yemagetsi toll mudziyo. Rudzi urwu rwechigadzirwa runogona kutengwa munyika medu uye vanoshandira mugwagwa wedu mukuru, uchinyatsoshanda. Iyo ipfungwa yakasununguka kwazvo nekuti navo tinokwanisawo kuwana zvikwereti pamigwagwa yakajairwa uye tinogona kuzvishandisa kubva kuSpain. Kana isu tine yemagetsi mutero muunganidzwa watengwa munzvimbo dzakaita seBanco Santander, Banco Popular, Liberbank, Caja Rural kana Abanca, pakati pevamwe, tinogona kuishandisa pasina dambudziko. Mune dzimwe nzvimbo tinonzwa beep iyo inoburitsa kana chishandiso chapfuura, asi chinofanirwa kutariswa kuti kune dzimwe nzvimbo hachirira. Izvo hazvireve kuti hazviitike, nekuti zvakaremerwa zvakadaro. Iyi ndiyo imwe yenzira dzakanakisa dzatinogona kuwana, kunyanya kana tichienda kakawanda kuPortugal kana kushandisa mugwagwa mukuru uchienderera mberi.
Kadhi rakabhadharwa kare
Imwe nzira yekubhadhara mutero muPortugal ndeye kubatanidza ndiro yemotokari kukadhi. Izvi zvinoitwa zvirinani, kuitira kuti kadhi ribatanidzwe kunyoreswa uye mari inobhadharwa. Izvo zvinogona kuitwa mune izvo zvinonzi EASYToll, nzira idzo isu patinowedzera kadhi panguva imwechete iyo kamera inoverenga ndiro rezinesi uye nekuzvibatanidza. Izvi zvicharamba zvichibhadharisa kubhadhara munzira. Chinhu chakasarudzika ndechekuti isu tine ino sevhisi pane mimwe chete migwagwa yayo mikuru seA22, A24, A25 uye A28.
Zvimwe nzira yekubhadhara ndeye neTollService. Iyi sevhisi inotibvumidza kubhadhara kwemazuva matatu kana kune mamwe marwendo. Iyo ine muganho wekunyoreswa katatu pagore uye chete mune avo vane zvemagetsi mutero muunganidzwa. Iyi sarudzo yakanaka kana tichizoenda rwendo pfupi kana kana tiri kuenda, semuenzaniso, kunhandare dzendege dzePorto kana Lisbon. Iyo ine yakaganhurirwa nguva asi iri yakanaka sarudzo yevhiki getaways uye kutenderera nzendo, kuti usafanirwa kutora yakakwira kubhadhara.
Chimwe chacho sarudzo inoita senge yakasununguka kushandisa iyo TollCard, ichibatanidza kunyoreswa kwedu nemubhadharo wemberi watinoita pamberi paInternet. Pane zviyero zvinosvika makumi mana emauro uye kureba kwayo igore rimwe, saka zvinobatsira zvakanyanya kupfuura dzimwe sarudzo. Izvi zvichatipa rusununguko rwakawanda, kunyange iri sarudzo yakanaka kana tikaronga kuita nzendo refu kana anopfuura mazuva matatu.
Chii chinoitika kana ma toll asina kubhadharwa
Kubhadhara mutero muPortugal kunosungirwa senge kuSpain uye Kukundikana kuita izvi kunosanganisira mhosva yemutero iyo ine faindi dzakakwira. Kune vanhu vazhinji vanofunga kuti nekuti hapana matumba, iwe unogona kungopfuura, uchidzivirira kubhadhara. Dambudziko nderekuti pane makamera uye zvese zvakanyoreswa, saka kana vakatimisa vanogona kutiita kuti tibhadhare kusvika kagumi zvakapetwa kupfuura zvatinofanira kubhadhara. Ivo zvakare vanobvumidzwa kuunganidza mota yako kudzamara huwandu hwechikwereti hwabhadharwa. Izvo hazvina kukodzera kuzviisa panjodzi, kunyanya patinogona kubhadhara zviri nyore pamusoro peInternet.
Maitiro ekuziva zvandiri kubhadhara
Tinogona kuve nerwendo rwakarongwa uye tisingazive kuti mubhadharo iwoyo ungatitorerei. Izvo zvakakosha, kana isu tichida kuronga zvese uye nekuziva zvatinoshandisa, izvo Ngativerengeiwo zvatinoshandisa nemotokari uye mutero. Ndokusaka iwe uchigona kutsvaga maturusi paInternet kuti uwane iyo chaiyo mutengo wenzvimbo dzakatarwa nemigwagwa mikuru yatinogona kutora, nekuti dzimwe nguva tine dzimwe nzira dzakasiyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » General » Makadii muPortugal